तिहार : भारतबाट आउँदै सयपत्री, २ करोड ४० लाखको माला किनबेच हुने ! « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
तिहार : भारतबाट आउँदै सयपत्री, २ करोड ४० लाखको माला किनबेच हुने !
काठमाण्डौं । आउँदै गरेको नेपाली हिन्दुहरुको दोस्रो महान चाड तिहारमा स्वदेशी फूलले नधान्ने भएपछि पुष्प व्यवसायीले भारतबाट डेढ लाख सयपत्री माला आयात गर्ने भएका छन्। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमारकसजु श्रेष्ठले तिहारमा करिव दुई करोड ४० लाख रुपैयाँसम्मको सयपत्री माला कारोबार हुने बताएका छन् ।
उनका अनुसार, तिहारमा प्रयोग हुने ८० प्रतिशत सयपत्री माला नेपालकै स्वदेशी उत्पादनले धान्छ। बाँकी २० प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । यसपाली तिहारमा मालाको भाउ प्रति माला ३० देखि ३५ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले जानकारी दिए ।
धादिङबाट मात्रै एक लाख भन्दा बढी सयपत्री उपत्यकामा आउँछ । उपत्यकामा एशोसिएसन आबद्ध ८० वटा फूल पसलहरु छन् । एसोसिएसनको तथ्यांक अनुसार देशभरी ३८ वटा जिल्लामा ६ सय ७५ वटा नर्सरीहरु एक सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फूल खेती गरिएको छ ।
मखमली फूलमा भने नेपाल आत्मनिर्भर रहेको एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । तिहारको भाइटिकाको दिनमात्र एक लाख मखमली मालाको प्रयोग हुने पनि उनले बताए । यो वर्ष तिहारमा मखमलीको माला प्रति गोटा ५० रुपैयाँ पर्ने छ ।
३ कार्तिक २०७३, बिजमाण्डु, ११।००